အသင်းဖော်တွေဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အာဂျင်တီးဘောလုံးလောကရဲ့ ကြယ်နှစ်ပွင့်
တစ်သင်းတည်းမှာ အတူကစားခဲ့ဖူးတဲ့ Maradona နဲ့ Messi
20 Aug 2018 . 3:31 PM
အာဂျင်တီးနား ဘောလုံးသမိုင်းမှာ မာရာဒိုနာ Maradona နဲ့ မက်ဆီ Messi ဘယ်သူ ပိုကောင်းလဲဆိုတာ အခုထက်ထိ အဖြေရှာမရသေးတဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်။ Modern ဘောလုံးလောကမှာ မက်ဆီ ရယူခဲ့တဲ့ ဆုဖလားတွေ၊ တစ်ဦးချင်းအောင်မြင်မှုတွေ၊ စံချိန်မှတ်တမ်းတွေက အထင်ကြီးစရာဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ ပရိသတ်တော်တော်များကတော့ မာရာဒိုနာထက် မက်ဆီက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို လက်မခံကြဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီဂန္ထ၀င်နှစ်ဦး တစ်သင်းတည်းမှာ အတူကစားဖူးခဲ့တယ်ဆိုရင် ပရိသတ်တွေ အံ့အားသင့်သွားမလား။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တုန်းက အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့ ရန်ပုံငွေပွဲတစ်ပွဲမှာ မက်ဆီနဲ့ မာရာဒိုနာတို့ဟာ တစ်သင်းတည်း အတူ ကစားခဲ့ဖူးပြီး အဲဒီပွဲဟာ ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံးပွဲတွေထဲက တစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။
အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ မာရာဒိုနာက ကြယ်ပွင့်ဟောင်း၊ မက်ဆီက တက်သစ်စ ကြယ်ပွင့်သစ်၊”မာရာဒိုနာလက်သစ်” ဆိုပြီး နာမည် စကြီးလာချိန်ပေါ့။ အဲဒီရန်ပုံငွေပွဲမှာ အာဂျင်တီးနားကြယ်ပွင့်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ ရီကွယ်လ်မေး Riquelme ၊ ဆီမြွန်နီ Simeone ၊ ဂယ်လာဒို Gallardo ၊ ဗာရွန် Veron တို့အပြင် မက်ဆီနဲ့အတူ ကြယ်ပွင့်သစ်ဖြစ်လာတဲ့ အခု မန်စီးတီးတိုက်စစ်မှူး အဂွဲရိုးလည်း ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။ မာရာဒိုနာနဲ့ မက်ဆီတို့ကို ပရိသတ်တွေက ဘယ်လိုပဲ နှိုင်းယှဉ်ပါစေ သူတို့နှစ်ဦးဟာ တွဲဖက်ညီညီနဲ့ ကစားခဲ့ပြီး မာရာဒိုနာရဲ့ ပဉ္စလက်ဆန်တဲ့ ကစားဟန်တွေက သူနာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၀ ကျော်ကာလတွေက အတိုင်း မပြောင်းလဲခဲ့ဘူး။
ဒါကြောင့် အာဂျင်တီးနား ဂန္ထ၀င်နှစ်ဦးရဲ့ ကစားဟန်တွေကို ဒီနေ့ခေတ် ပရိသတ်တွေလည်း မြင်တွေ့ခံစားနိုင်ဖို့အတွက် Video Link နဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်သူပိုကောင်းလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ပဲ ဆုံးဖြတ်ကြည့်ကြပါတော့ . . .
ရန်ပုံငွေပွဲမှာ အတူတကွ ကစားခဲ့တဲ့ မာရာဒိုနာနဲ့ မက်ဆီတို့ရဲ့ Video Link
တဈသငျးတညျးမှာ အတူကစားခဲ့ဖူးတဲ့ Maradona နဲ့ Messi
အာဂငျြတီးနား ဘောလုံးသမိုငျးမှာ မာရာဒိုနာ Maradona နဲ့ မကျဆီ Messi ဘယျသူ ပိုကောငျးလဲဆိုတာ အခုထကျထိ အဖွရှောမရသေးတဲ့ ပုစ်ဆာတဈပုဒျ။ Modern ဘောလုံးလောကမှာ မကျဆီ ရယူခဲ့တဲ့ ဆုဖလားတှေ၊ တဈဦးခငျြးအောငျမွငျမှုတှေ၊ စံခြိနျမှတျတမျးတှကေ အထငျကွီးစရာဖွဈခငျြဖွဈမယျ၊ ပရိသတျတျောတျောမြားကတော့ မာရာဒိုနာထကျ မကျဆီက ပိုကောငျးတယျဆိုတဲ့ အယူအဆကို လကျမခံကွဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဒီဂန်ထဝငျနှဈဦး တဈသငျးတညျးမှာ အတူကစားဖူးခဲ့တယျဆိုရငျ ပရိသတျတှေ အံ့အားသငျ့သှားမလား။ ၂၀၀၅ ခုနှဈတုနျးက အာဂငျြတီးနားနိုငျငံရဲ့ ရနျပုံငှပှေဲတဈပှဲမှာ မကျဆီနဲ့ မာရာဒိုနာတို့ဟာ တဈသငျးတညျး အတူ ကစားခဲ့ဖူးပွီး အဲဒီပှဲဟာ ဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျ အကောငျးဆုံးပှဲတှထေဲက တဈပှဲဖွဈခဲ့တယျ။
အဲဒီအခြိနျတုနျးကတော့ မာရာဒိုနာက ကွယျပှငျ့ဟောငျး၊ မကျဆီက တကျသဈစ ကွယျပှငျ့သဈ၊”မာရာဒိုနာလကျသဈ” ဆိုပွီး နာမညျ စကွီးလာခြိနျပေါ့။ အဲဒီရနျပုံငှပှေဲမှာ အာဂငျြတီးနားကွယျပှငျ့ဟောငျးတှဖွေဈတဲ့ ရီကှယျလျမေး Riquelme ၊ ဆီမွှနျနီ Simeone ၊ ဂယျလာဒို Gallardo ၊ ဗာရှနျ Veron တို့အပွငျ မကျဆီနဲ့အတူ ကွယျပှငျ့သဈဖွဈလာတဲ့ အခု မနျစီးတီးတိုကျစဈမှူး အဂှဲရိုးလညျး ပါဝငျခဲ့ကွတယျ။ မာရာဒိုနာနဲ့ မကျဆီတို့ကို ပရိသတျတှကေ ဘယျလိုပဲ နှိုငျးယှဉျပါစေ သူတို့နှဈဦးဟာ တှဲဖကျညီညီနဲ့ ကစားခဲ့ပွီး မာရာဒိုနာရဲ့ ပဉ်စလကျဆနျတဲ့ ကစားဟနျတှကေ သူနာမညျကြျောခဲ့တဲ့ ၁၉၈၀ ကြျောကာလတှကေ အတိုငျး မပွောငျးလဲခဲ့ဘူး။
ဒါကွောငျ့ အာဂငျြတီးနား ဂန်ထဝငျနှဈဦးရဲ့ ကစားဟနျတှကေို ဒီနခေ့တျေ ပရိသတျတှလေညျး မွငျတှခေံ့စားနိုငျဖို့အတှကျ Video Link နဲ့ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ ဘယျသူပိုကောငျးလဲဆိုတာ ကိုယျတိုငျပဲ ဆုံးဖွတျကွညျ့ကွပါတော့ . . .
ရနျပုံငှပှေဲမှာ အတူတကှ ကစားခဲ့တဲ့ မာရာဒိုနာနဲ့ မကျဆီတို့ရဲ့ Video Link